Coinbase ewebata LinkedIn Executive ka ọhụrụ Data Chief
Cryptocurrency Exchange mmalite Coinbase egowo LinkedIn Isi nke Analytics na Data Science.
michael Li, a agadi LinkedIn manager onye jiworo ihe karịrị afọ asaa na ọkachamara ụka n'Ịntanet n'elu ikpo okwu, ga-iche na ọrụ nke Vice President of Data, dị ka a blog post bipụtara Tuesday.
Ya ọrụ ka nnọọ lekwasịrị anya mwekota nke data n'ime ego ọrụ, e-azụmahịa na-elekọta mmadụ netwọk, O dere post. O na-ekwere na e nwere “-adịghị agwụ agwụ ohere” iji data na cryptocurrency na blockchain ohere.
“M obi ụtọ banyere ike kọwaa na ha webata ọrụ data nwere ike igwu a ngwa ngwa evolving ohere, na ijikọta otutu echiche na-edozi ịma aka ndị ọhụrụ na ihe ndị a mụtara site m gara aga,” ọ si.
“Data ga-adị oké mkpa iji wusikwuo Coinbase ozi na atụmatụ nke na-anapụta ndị kasị tụkwasịrị obi na mfe na-eji cryptocurrency ngwaahịa na ọrụ. M na-eche ihe ùgwù na-na a siri ike na-akwụghachi ụgwọ ọrụ ọhụrụ na-amalite n'isiakwụkwọ na-esonụ nke ọrụ m. »
Na nke a ọhụrụ àgwà, Coinbase aga n'ihu ya afọ nke nzube mụbaa ya ndú otu. N'oge gara aga ọnwa iri, na Exchange egowo Vice President of Finance, Communications na Engineering, nakwa dị ka agadi ego na nnabata ọrụ.
Ọ kachasị, Li bụ akpa LinkedIn manager isonyere Coinbase usoro. na March, Coinbase mara ọkwa na Emilie Choi abaala ụgbọala nnweta.
kasị nso nso, ụlọ ọrụ mara ọkwa na ọ ga-iku karịa 100 ọhụrụ ọrụ maka ya na nso nso meghere ụlọ ọrụ dị na New York n'afọ ọzọ.
Kraken Daily Market Report maka 17.09.2018
$123M ahịa gafee ahịa niile taa
nkwa $1 and BECOME A TECHCRA...
BỤGHỊ / ele - Best Blockchain in...
Ego - tough privacy for a d...